Ukuthuthukisa i-Iceweasel ku-Debian Wheezy | Kusuka kuLinux
Tesla | | Aplicaciones, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Ngiqala ukubhuloga ngishicilela isifundo esilula ukusibuyekeza I-Iceweasel en UDebian Wheezy. Kungenzeka kithi ukuthi, ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, sifuna ukubuyekeza i-Iceweasel enguqulweni yakamuva (Futhi ikakhulukazi ngezinga lezibuyekezo ezithathwa yiMozilla). Lokhu kungenzeka ngezindlela eziningi ezahlukene. Kodwa-ke ngizokukhombisa eyodwa ebengingayazi futhi inakekelwa yi Ithimba le-Debian Mozilla. Uma, ngokuphambene nalokho, ufuna ukufaka esikhundleni se-Iceweasel ngeFirefox ngikubhekisa kufayela le- umhlahlandlela de izinga.
Ake siye kuyo ngaleso sikhathi:
- Okokuqala, sifaka ifayela ngaphakathi /etc/apt/source.list.d/ ebizwa (ingaba nanoma yiliphi igama olifunayo, kepha ngesandiso uhlu ) iceweasel.list. Futhi singahlela ngqo ku- /etc/apt/sources.list. Mina, ngivame ukukwenza nomhleli nano:
- Uma usungaphakathi kwe-nano, sikopisha okulandelayo kufayela:
- Sigcina ifayela bese siyaphuma. Manje, kufanele sibuyekeze nge uthole kahle:
- Futhi ekugcineni esikhundleni sethu I-Iceweasel ngenguqulo Ukukhululwa (okwamanje 20):
Ngakho konke lokhu, manje sesingajabulela inguqulo yakamuva ye- I-Iceweasel.
Ngokomthetho, inqubo akufanele inikeze noma yimaphi amaphutha noma ukwehluleka. Noma kunjalo, yenza kanjalo ngokuzibeka wena engcupheni.
Ekugcineni, uma isibuyekezo sisinikeza ukwehluleka okubalulekile, vele ufake ifayili le- ukhiye okuvela ekugcineni kwesixhumanisi esilandelayo:
Le nqubo ingenziwa ngokusatshalaliswa okuhlukile kwe- UDebian (uLenny, Squeeze, Wheezy futhi akazinzile) nangezinhlobo ezahlukahlukene ze- I-Iceweasel. Ngakho-ke ngibheka iwebhusayithi esemthethweni yeThimba le-Debian Mozilla ukuze kuboniswane, kanye nomthombo walo lonke lolu lwazi:
Ngiyethemba ilusizo kuwe! Sanibonani emphakathini!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ukuthuthukisa i-Iceweasel ku-Debian Wheezy
Okuthunyelwe okuhle kakhulu !! Ngaphezu kwakho konke, angisebenzisanga msebenzi wokukuhlela .. lokho kuhle 😀
Ngiyabonga! Kulokho kukhona umhlahlandlela wabahleli be-desdelinux 😉
Ngizamile i-Iceweasel selokhu ngafaka i-Debian Squeeze yami futhi ukukhuluma iqiniso, kuhle (kokubili ukwesekwa okuzinzile nokuhlolwa kuchazwe kahle ku-mozilla.debian.net futhi asikho isidingo sokudideka kakhulu lapho uyisebenzisa).
Ake sibuyekeze ukuze sibone ukuthi kuhamba kanjani.
Ngiyabonga kakhulu, ngoba lapha ngizame kusuka kuCrunchbang!
Sengivele ngine-firefox 20. Noma ngithanda kakhulu ukuthi bekusezimpumulweni ze-mozilla.debian.net lapho kukhona khona izinhlobo ze-esr, beta ne-aurora.
Ingafakwa futhi kusuka ezinqolobaneni zeTanglu, njengamanje ngifakelwe iTanglu kuVbox futhi isebenzisa inguqulo 20.
Ulande kuphi iTanglu? Ngisho lokhu ngoba kuwebhusayithi esemthethweni akuyona eyokulanda ...
ayikho iso le-tanglu. kufanele ulande i-debian 6, engeza ama-tanglu repos bese ufaka.
Ngeshwa, iFirefox ayihambisani nemiyalo yeDebian yesoftware yamahhala ngoba noma yikuphi ukuguqulwa okwenziwe kukhodi yomthombo kufanele kubhekwe yisisekelo seMozilla uqobo yingakho baqamba kabusha iFirefox ngokuthi i-Iceweasel neMozilla icaphuna i-Iceweasek ezibonelweni zakhe zokuhlonishwa nokuningi daka.
Noma kunjalo, womabili ama-Iceweasel neFirefox asebenza kahle ku-Debian, kanye nokwangaphambili kugijima ngokushesha okukhulu kunokwamuva.
Ngiyabonga ngesifundo, ngizosisebenzisa.
tanglu, uvelaphi? shicilela isixhumanisi uma kukhona ngempela inguqulo kaPercaff
Masithi iSudo ku-debian ayisebenzi ngakho empeleni umyalo ungowakho
Yebo, kulungile. Lowo umkhuba omubi owenziwe Ubuntu ekufuneni ukusebenzisa uhlelo olufanayo lokuphatha ngaphandle kwephasiwedi sengathi yiWindows.
Ngamafuphi, ngakho kusebenza kakhulu.
@INDX @germany Embikweni kaTanglu Matthias Klumpp uthi ungafaka iTanglu usebenzisa ukufakwa kweDebian bese uvuselela konke kuTanglu, futhi uncoma ukukwenza emshinini obonakalayo, ngikwenzile futhi ezinsukwini ezimbili ezedlule bengigile- izingxabano ze-pc zokuncika kwe-grubflx-payload ikakhulukazi, namhlanje ngivuselele futhi futhi akubanga khona kungqubuzana, abafana baqhubekela phambili kancane kancane.
Okunye abakwenzile ukushintsha i-logo kwazise eyedlule ibifana kakhulu ne-Debian.
Ngafaka ukufaka ku-Debian wheezy ngaphandle kwemvelo, phawula kulayini ababhekise ku-Debian kufayela le-source.list bese ufaka okulandelayo:
i-deb http://archive.tanglu.org/tanglu/ aequorea main don non-free
Ngemuva kwalokho ngenze ukuvuselelwa kohlelo lonke ngaphandle kwezinkinga, kunezinkinga ezithile zokuncika ikakhulukazi ekufakweni kwe-gnome ngoba zisebenza ngokugcwele, nge-kde angibanga nankinga. Baphinde bacele usizo kubasebenzisi abanolwazi lokwakha ama-live-cd noma asebenze nesifaki esikutholakala kuyo yonke indawo.
Lapha ngishiya izixhumanisi ezingaba nentshisekelo kuwe.
Isifundo esihle kakhulu, ikakhulukazi uma sise Wheezy (yize umhlahlandlela wesiNgisi ovela ku-mozilla.debian.net usho ngokufana nalokho abakushicilele lapha), ulusizo impela.
Into eyodwa: uma ufuna ukuthi i-Iceweasel ivele ngeSpanishi, mane uthayiphe lo mugqa womyalo njengezimpande: "apt-get install -t experimental iceweasel-l10n-es-es" (yize ama- "es-es" esebenza, ungasebenzisa futhi "es-mx", "es-ar" kanye ne- "es-cl" ngokuya ngenguqulo ethandwa nguwe oyikhethayo).
Ngakwesokudla, ku-mozilla.debian.net kusho cishe into efanayo. Kodwa-ke, ngikuthole kuthakazelisa ukubeka imiyalo ngeSpanishi. Ngaphandle kwalokho, abantu abaningi kungenzeka bangawazi amawebhusayithi wezingxenye zephrojekthi ye-Debian. Njengoba bekunecala lami kuze kube yizolo 🙂
Izwi leseluleko: ungalandeli izifundiswa ze-EsDebian, ngoba zingahle ziphelelwe yisikhathi noma zingaqondakali.
Ku-Debian wiki banamathiphu amahle kakhulu, kepha akukho ukugcinwa okuncane kuwo. Noma kunjalo, imibhalo yabo ilusizo impela ukucacisa ukungabaza futhi iforamu yabo iyasebenza impela futhi bakusiza ngenkinga encane kakhulu (ngokungathi sína, futhi imibhalo yabo ingenye yezinto ezinhle kakhulu futhi izimpendulo zabo zishesha).
Ngiyabonga kakhulu, ithiphu enhle kakhulu.
Lesi yindatshana hhayi ama-blowjob engiwabhala kwelami.
Ngivuselele i-iceweasel ngaphandle kwezinkinga. I-iceweasel 10 isebenza kahle kimi ngaphandle kwe-flashplayer engingayazi ngoba lapho ngilalele umsakazo noma ngibuka amavidiyo okwesikhashana kudla ama-CPU amaningi. Angazi noma kwenzeka komunye umuntu Ngama-20 okwamanje ngaphandle kwezinkinga. Ukuphela kwalokho engikubeka enguqulweni ezinzile ukugcina inguqulo yesiphequluli okwamanje ephelelwe yisikhathi noma ngabe bathi inguqulo ye-lts futhi ingasaphathwa eyonyaka kusuka manje. Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule bengivele nginezinkinga ngesiphequluli ekucingeni lapho ngifaka amanye amakhasi.
Ku-mozilla.debian.net bathi ngeke besasekela inguqulo engu-3.5 eza ngokuzenzakalela esitebeleni (cindezela) futhi lokho kuncoma ukubuyekeza isiphequluli. Kungakho ngivuselele i-Iceweasel yami futhi yenza izimanga (anginalutho oluphikisana ne-flash, isebenza ngokushesha okukhulu futhi iyamanzi uma ubuka i-YouTube futhi ishesha kakhulu kune-Windows).
Manje, ngiyabona ukuthi i-Iceweasel / Firefox isebenza ngaphandle kokuhlaba ikhefu futhi ihlinzeka amakhasi wewebhu njengoba kufanele ngaphandle kokuphahlazeka (futhi ngiku-Lenium 4 eshibhile).
Ngithanda kakhulu i-Iceweasel, cishe ngesifiso nje engifaka iFirefox kuDebian.
Ngibona kakhulu!!! Konke kulungile
oooopps! kimi awuzange usebenze
i-iceweasel: Kuya nge-xulrunner-21.0 (> = 21.0-1) kepha ngeke ifake
Le ndlela ibilungile ngenkathi uG Wheezy kuyigatsha lokuhlola kepha manje lingadala izinkinga, kungcono ukulandela imiyalo ekhonjiswe ku- http://mozilla.debian.net/ okuyi:
Uyangeza i-deb http://mozilla.debian.net/ ukukhululwa kwe-Wheezy-backports iceweasel kwimithombo yakho.list
Uma uthola iphutha ufaka iphakheji yokhiye ebizwa ngokuthi pkg-mozilla-archive-keyring
Ufaka i-Iceweasel nge thola ukufaka-i-wheezy-backports iceweasel (yize ngithanda ukufaneleka)
Ngokuphumelelayo; indlela oyishoyo ingcono kakhulu ukuyibuyekeza.
Siyabonga ngesikhathi sakho nezimfundiso zakho
UMauricio Yaman Yusuf kusho
Uhlala engitshela ukuthi lesi siphequluli asivumeli i-HTML5…!
Angiyithandi kakhulu kepha ngikujwayele ukuyisebenzisa, futhi iFirefox namuhla ihamba kancane futhi iphahlazeka ngaso sonke isikhathi, futhi iqiniso ukuthi angisasithandi, bengifuna ukwenza isiphequluli sami angikwazi ukukwenza konke uma othile ekuthanda Unentshisekelo ekubambeni iqhaza xhumana nami
Phendula uMauricio Yaman Yusuf